Banyere Anyị - Quanzhou Morton Machinery Co., Ltd.
Morton Machinery Company bụ ụlọ ọrụ teknụzụ na -arụpụta akwa na -arụ ọrụ, na -enye ọrụ na ụlọ ọrụ na -eweta akwa na akwa.Ihe ngwaahịa anyị niile nwere ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa niile. Anyị anọwo na-enye igwe Single Jersey, Fleece Machine, Jacquard Machine, Rib Machine & Mepee obosara igwe na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya na nkwado teknụzụ na nkwado saịtị na India, Turkey na Vietnam ruo ọtụtụ afọ. Anyị bụ naanị ndị China imepụta nke kwụsịtụrụ imebe waya na igbe mkpuchi aluminom nke kachasị mma maka nkwụsi ike igwe na nkenke dị elu.
Ụlọ ọrụ Morton Machine n'ihi ahụmịhe na nraranye nke ndị ọrụ anyị. Anyị nwere ahụmịhe miri emi iji nye nkwado n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche; site na nhọrọ akụrụngwa, ọzụzụ, sistemụ kọmputa na imezi igwe na saịtị site na nkwado teknụzụ na ịrụ ọrụ.
Anyị nwere ike nyere aka mee ka azụmaahịa gị ka mma.
Igwe Morton na -akwado ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị na ndị nnọchi anya anyị site n'iwepụta igwe na -arụ ọrụ dị mma na akụkụ ya n'oge yana n'ụzọ akọ na uche, yana idobe mmekọrịta ntụkwasị obi na nsọpụrụ n'etiti ndị mmekọ ọ bụla.
Njikọta ndụmọdụ azụmahịa na ọrụ nhazi n'efu. Ọkachamara imewe akwa na imepụta nha igwe, akụkụ akụkụ igwe niile na imewe sistemụ.
N'okpuru ọrụ nkwekọrịta
Mmejuputa njikwa njiri mara mma, nnyefe oge, nhazi lọjistik nchekwa yana ezigbo nkwado ego.
Anyị ga -eji ịnụ ọkụ n'obi 100% dozie ma mezie nde kwuru nde njehie nwere ike ịdị n'oge.
Ihe niile anyị na -eme, iji belata ọnụ ahịa ịzụrụ na ndozi gị, ma mee ka ị nwee asọmpi ahịa mpaghara. Ọrụ zuru oke nke Morton, ga -azọpụta gị ọtụtụ ọrụ ma wetara gị ahụmịhe.
Ntị maka nkọwa
Nwalee ihe ọ bụla iji wee debe ndekọ maka ndenye ego.
A na -etinye akụkụ ya niile nke ọma, onye na -echekwa ngwaahịa na -edetu ihe niile dị n'ime ụlọ.
Dekọọ usoro na aha onye ọrụ ọ bụla, nwere ike ịchọta onye ga -ahụ maka nzọụkwụ.
Nnyocha igwe siri ike tupu nnyefe maka igwe ọ bụla. A ga -enye ndị ahịa akụkọ, foto na vidiyo.
Ndị otu ọkachamara na ndị gụrụ akwụkwọ dị elu, eriri waya a kwụsịtụrụ bụ usoro ọhụrụ anyị, arụmọrụ na -eguzogide dị elu, arụmọrụ na -ekpo ọkụ dị elu.
Oge akwụkwọ ikike bụ afọ 1, a ga -eziga amụma ikike na email iche.
Ọrụ VIP maka gị
Enweghị obere usoro, ọ nweghị obere onye ahịa, onye ahịa ọ bụla bụ onye ahịa VVVIP maka anyị.
Ọ bụghị naanị ndị ahịa na -azụtakwa onye mmekọ azụmahịa. Morton ga -enye nkwado zuru oke maka ịgbatị azụmahịa gị.
Ọrụ ọsọ ọsọ: ọrụ ịntanetị 24h na -aza ajụjụ gị na nke mbụ.
A ga -enye nkọwa na nhọrọ ozugbo enwere ike ozugbo ị nweta ajụjụ gị.
Ndụmọdụ ọkachamara: dị ka ọnọdụ ọrụ gị si dị, anyị na -enye nhọrọ kacha dabara maka nhọpụta gị, ma na -agbasosi ike ịnye gị nrụpụta ahaziri iche.
Ezi nkwukọrịta: ụmụ agbọghọ na -ere akwụkwọ gụrụ akwụkwọ dị elu niile nwere asambodo asambodo Bekee.
N'ezie ọ bụrụ na ị na -asụ Russian, French ma ọ bụ Spanish, ndị ntụgharị ntụgharị pụrụ iche na -enye gị ọrụ kacha dịrị gị nso.
Ahụmịhe azụmaahịa: Azụmaahịa niile nwere ahụmịhe mbupụ ihe karịrị afọ 3, maara amụma mbupụ yana usoro mbubata mba, na -enyere gị aka ime ka ndị ahịa nwechapụ na usoro mbubata nke ọma.
Morton nwere olile anya na gị na gị ga -azụkọ ahịa! Ezigbo onye na -ebubata ngwaahịa bụ maka ezigbo nwoke azụmaahịa dịka gị!